जागी स्ट्यु - थर्मोमिक्स रेसिपीहरू ThermoRecines
सुरूवात26 मिनेट6 व्यक्ति
म थोरै भएको हुनाले मलाई त्यो याद छ ईस्टर, मेरो हजुरआमा मार्सेले हामीलाई यो थाल एक दिन खानको लागि बनाईदियो, र मिठाइका लागि उनीहरूले यो स्वादिष्ट खानु हुँदैन फ्रेन्च टोस्ट। मेरी आमा र मलाई यो मन पर्थ्यो। यदि हामी छुट्टीमा गयौं भने मेरी हजुरआमाले हामीलाई यस स्टूको प्लेट पठाउँनुहुनेछ जुन हामीलाई "महिमा" जस्तो स्वाद दिइन्थ्यो।
अब म अलि बढेको छु, हे, हे ... र म एक हुँ जो यस वर्षमा मेरो स्ट्यु डिश वा मेरो भाँडा तयार पार्ने जिम्मामा छु, जुन म सामान्यतया एक भन्दा बढी नै खान्छु। यो मलाई मन पर्छ!! यो त्यस्तो चीज हो जुन एकसँग जन्मेको हुन्छ, तर यसको सबै चीजले मलाई बौलाहा बनाउँछ। चम्चा र मलाई यो लाग्छ कि मेरी सानी केटीले पनि यो उन्माद लिइरहेको छ। उनले २ बर्षका साथ स्ट्युको खाना खाएको हो, तपाईंले यसलाई हेर्नुपर्‍यो!
यो धेरै छ तयार गर्न सजिलो र यो धेरै राम्रो छ, यद्यपि पक्कै पनि यो सबै चीज जस्तै तपाईले यसका सामग्रीहरू मनपर्दछ।
1 सतर्क पोताजे
क्लासिक इस्टर डिश जुन हाम्रो रेसिपी पुस्तकबाट हराउन सक्दैन।
१ ठूलो चम्मच मीठो पेपरिका
300 ग्राम पालक, पग्लियो र पानी भयो
Al०० ग्राम desalted र flaked cod
२ कडा उमालेको अण्डा
हामीले गिलासमा प्याज र लसुन राख्यौं। हामी प्रोग्राम Seconds सेकेन्ड, गति 5। हामी प्रोग्रामिंग फ्राई गर्दछौं १० मिनेट, वरोमा तापमान, चम्चा गति।
पपरिका, table चम्चा पकाइएको चिसो र २ चम्मच पानी थप्नुहोस्। हामी प्रोग्राम Seconds० सेकेन्ड, गति 15।
हामी पानी, पालक र तेज पात थप्छौं। हामी प्रोग्राम १० मिनेट, १०० °, बाँया पालो, चम्चाको गति।
बाँकी पकाइएको छोला र कोड क्रुम्ब्स र कार्यक्रम थप्नुहोस् १० मिनेट, १०० °, बाँया पालो, चम्चाको गति।
यदि तपाइँ अधिक तरल चाहानुहुन्छ भने हामी थोरै तातो पानी थप्न सक्छौं। उमालेको अण्डाहरू स्लाइसमा काट्नुहोस् र सेवा गर्नुहोस्।
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: Celiac, सलाद र तरकारीहरू, सजिलो, ल्याक्टोज असहिष्णु, तरकारीहरू, १ घण्टा भन्दा कम, इस्टर रेसिपीहरू
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » विशेष व्यंजनहरु » Celiac » सतर्क पोताजे
तर कति धनी सिल्भिया !!!! स्वादिष्ट, मलाई चम्चा स्ट्युहरू मन पर्छ।
राम्रो कुरा, यदि यो घरमा नभएको भए मलाई मात्र मन पर्छ !!!!! म यो गर्न कोसिस गर्नेछु।
ELO लाई जवाफ दिनुहोस्
स्वादिष्ट !!!! यो बिहान खानको लागि खस्छ।
यो उत्तम हुनुपर्छ !! तर यदि रातमा पकाएको चिसो प्रयोग गर्नुको सट्टा हामीले रातमा भिजेको कडा छोलाको प्रयोग गर्यौं भने हामी कतिन्जेल प्रोग्राम गर्दछौं ??? र कड क्रुम्ब्स कहिले समाहित हुने थियो?
धेरै धेरै धन्यवाद र तपाइँको व्यंजनहरु मा बधाई छ; म हरेक दिन भित्र जान्छु के नयाँ छ र यसैले म कसरी आफूलाई थर्मामिक्स प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्दछ।
बेलन, मलाई लाग्छ कि जब तपाईले छोला थप्नुहुन्छ तपाईले उनीहरूलाई २ for मिनेट सम्म पकाउनु पर्छ र जब यो १० मिनेट लिन सक्दछ, म मेशिन बन्द नगरीकन कडको टुक्रा जोड्दछु। पछि, तपाईंले छोले पनी कोसिस गर्नु पर्छ यदि उनीहरू अझै कडा नै छन् र अधिक समय चाहिन्छ। यदि तपाईं हिम्मत गर्नुहुन्छ भने हामीलाई कस्तो छ हामीलाई बताउनुहोस्?
मैले भर्खरै यो खाए र यो उत्कृष्ट छ, मेरो श्रीमान्ले आफूले मनपराएको दुई भाँडा खाए।
तपाईंको व्यंजनहरु को लागी धन्यवाद
मलाई खुशी छ कि तपाईले यो मनपराउनु भयो। घरमा म एक हुँ जो सामान्यतया यो थालको पुनरावृत्ति गर्दछ। शुभकामना
एउटा सानो प्रश्न के भाँडाबाट पकाइएको चिसला हो कि तपाईंले तिनीहरूलाई पकाउनु हुन्छ?
कार्मेन भाँडोबाट हो, तर यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने तपाइँ तिनीहरूलाई पहिले पकाउन सक्नुहुन्छ र थप्न सक्नुहुन्छ। यो सबै थोरै स्ट्रिमलाइन गर्नु हो।
कार्मेन, मैले घर मालिकको स्टूको एक गिलासको भाँडो प्रयोग गरेको छु।
धेरै धेरै धन्यबाद, म यसको प्रयास गर्नेछु किनकि यो राम्रो देखिन्छ।
सधैं जस्तो १०
स्टू भनेको मलाई मनपर्ने डिश हो। मैले टिएममा यो कहिले गरेको छैन, तर मैले प्रयास गर्नुपर्‍यो, यो पक्कै राम्रो छ।
पोखरालाई जवाफ दिनुहोस्
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ थर्मोमिक्ससँग प्रेम गर्नुहुन्छ, यो धेरै सजिलो, आरामदायक र धेरै स्वादिलो ​​छ!
आमा कति राम्रो छ जुन यो प्लेट हो !!!
म तपाईंसँग मारिया हुँ। म स्ट्यु मन पराउँछु !! मलाई खुशी छ कि तपाईलाई यो मन परेको छ।
लुलि अर्गियानो भन्यो
के यहाँ वरिपरि केटा अचम्मको छैन र?…। उठ्ने पोटेज अविश्वसनीय थियो ... यसले मलाई मेरी आमा र हजुरआमाको सम्झना गरायो ... अति उत्तम ...। नुस्खा र ब्लग को लागी धेरै धन्यबाद
LUILLI ARGUIÑANO लाई जवाफ दिनुहोस्
म के गल्ती गरिरहेको छु भनी मलाई भन्न चाहन्छु, किनकि मैले यो दुई पटक गरेको छु र चना पूरै झर्छ, हामी यसलाई खान्छौं किनभने सत्य धेरै राम्रो छ, तर चना "गायब" हुन्छ म हार मान्ने छैन, तर म। के हुन्छ मलाई बताउन चाहनुहुन्छ
पिलर, तपाइँसँग थर्मोमिक्सको कस्तो मोडल छ? किनभने यदि यो टीएम २१ हो भने तपाईंले पुतली राख्नु पर्ने थियो किनकि यदि हामीले चलाएको प्रायजसो रेसिपीहरू बाँया, चम्चा गतिमा बदल्दैनौं, यदि यो अर्को मोडल भएको भए यसले तपाईंलाई पूर्ववत् गर्नेछ।
थर्मोमिक्स मोडेल TM-31 TD2 + Varoma हो
म किन कोडलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छु?
नमस्कार अना, तपाईं यसलाई हाक, समुद्री मगर, समुद्री बास, मंकफिस, कन्जर ईएल, डगफिशको लागि प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुनेछ।
ठीक छ, म समुद्री बास कोशिस गर्नेछु, म तिमीलाई कस्तो छ भनेर बताउँछु
नमस्कार, मलाई तपाईंको व्यंजनहरू मनपर्दछ र मैले ती भर्खरै प्राप्त गरेको छु।
मैले यो बनाएको छु तर यो अति सूफी हो र पेप्रिकाको विषयको लागि के तपाईं सूपको चम्चा राख्नुहुन्छ? के म थोरै रंगको साथ छोडियो?
नमस्ते कार्मेन, कहिले काहिं बढी वा कम सूफी छोलाको प्रकार र ब्रान्डमा निर्भर गर्दछ (म ब्रान्ड परिवर्तन गर्दैछु, जस्तै मसूरको साथ र प्रत्येक पटक बिभिन्न हुँदा)। त्यसोभए यदि तपाइँ उही ब्रान्ड प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, सँधै grams० ग्राम कम पानी थप्नुहोस् वा हटाइएको बेकरलाई पछिल्लो minutes मिनेटको लागि छोड्नुहोस् ता कि थप पानी वाफ हुन्छ। प्याप्रिकाका लागि हो, ठूलो चम्चा राख्नुहोस् (यो कुरा मनमा राख्नुहोस् कि सूप people व्यक्तिको लागि हो)। लेख्न र हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा धन्यवाद!
नमस्ते, तपाईं कड कहाँ किन्नुहुन्छ? तपाईं मलाई यो व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ? धन्यवाद
हेलो, के पालक कोकड थपियो?
नमस्ते टोमेस, पालक कच्चा थपिएको छ। र यदि तपाईं स्थिर प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले त्यसलाई राम्रोसँग निकाल्नु पर्छ। भाग्यमानी!
यदि चार्ट ताजा छ भने, के म समान पैसा राख्नु पर्छ वा कम? धन्यबाद।